[တရားဝင်] အမျိုးမျိုးမီဒီယာကနေ dr.fone ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘို့အအသုံးပြုသူများနှင့်မီဒီယာကနေ 2000 ကျော်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုစတင်အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း tool အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ ချာအားဖြင့် iOS ကို Data Recovery - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
တကယ့်ငါမတော်တဆဖျက်ပစ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြန်ထုတ်။ ဒါဟာငါဆိုးဆိုးရွားရွားထဲတွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်မယ့်ကယ်ဆယ်ရေးအကြောင်းမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ * ထ * လက်မဒေါင်းလုပ်ရကျိုးနပ်ခဲ့
nice ဂျုံးအားဖြင့် Android မှာဒေတာများကို Backup ကို & Restore - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
ဂရိတ်အစီအစဉ်! ဂရိတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု! Jenny Pless နေဖြင့် iOS ကို Data Recovery - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
iOS အတွက် Wondershare dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ (Mac) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Juan Carlos က F ခြင်းဖြင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘို့ - iOS ကို Data Recovery
တွေ့သည်နှင့်အရမ်း easiy ရှာဖွေနေခဲ့ပြန်ပြီးရယူနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို (ဝင်း) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Spencer ဂျိမ်းစ်အားဖြင့် Android မှာ Data Recovery - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
dr.fone တကယ်ငါ၏အပျောက်ဓာတ်ပုံများ, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အဆက်အသွယ်များ, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထုတ်ယူ!
gooooood Kare အားဖြင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘို့ - iOS ကိုဒေတာများကို Backup ကို & Restore
5 ကြယ်ဈဒီ app ကအရမ်း gooooooooooooooooooooooooooooooood စိတ်ကူးမနိုင်
Comentario က de Wondershare dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာမသန်စွမ်းကို iOS (ဝင်း) ။ ခြေအားဖြင့် iOS ကို Data Recovery - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
Excellent က program ကိုအမှုအရာတကယ် Import, သင်ဆုံးရှုံး data အားလုံးကိုနှင့်အတူကူညီပေးသည်
iOS အတွက်အကောင်းဆုံး software ကို Tyrone ဝီလျံအားဖြင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘို့ - iOS ကို Data Recovery
dr.fone အံ့ဖှယျကရှင်းပြသည် step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းသော UI ကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဘာမျှမဖြစ်နိုင်သည်မှားကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤသူကားငါကိုဖြတ်ပြီးလာဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး Data Recovery Software များဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာ Jay အားဖြင့် က iOS စနစ် Recovery ကို - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
ဂရိတ်! ဒိုများက iOS ကို Data Recovery - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို System ကို Recovery ကို Paula အားဖြင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘို့ - iOS ကို System ကို Recovery ကို
100% အကျင့်ကိုကျင့် Klaus Petig အားဖြင့် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘို့ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို
တစ်ဦး tool ကို Select လုပ်ပါ dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်ဆင်းမ်ကဒ်သော့ဖွင့ dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Backup ကို & restore dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Lock ကိုမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေး dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Extraction (ပျက်ဆီးနေသောစက်ပစ္စည်း) MirrorGo အန်းဒရွိုက် Recorder MobileTrans ဖုန်းလွှဲပြောင်း dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Private Data Eraser ကို dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုအပြည့်အဝဒေတာများနေတဲ့ Eraser dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို WhatsApp ကိုလွှဲပြောင်း, Backup ကို & Restore dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုဒေတာများကို Backup ကို & Restore dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို System ကို Recovery ကို dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Data Recovery dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို LINE Backup ကို & Restore dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Viber ကို Backup ကို & Restore dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Kik Backup ကို & Restore Submit / ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ Check
အန်းဒရွိုက်ခေါင်းစီးသတင်း, ကို Android အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် Android မှာသတင်းရဲ့ဦးဆောင်သတင်းရပ်ကွက်များ၏တဦးတည်း။
TopTenREVIEWS, အမြင် productbusiness န်ဆောင်မှုများနှင့် software ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ။
ကွန်ပျူတာ, အိုင်တီ, သိပ္ပံ, မီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးအပေါ်သတင်းနှင့်ဖိုရမ်များ။ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ၏စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
PHON က Android, Google မိုဘိုင်း OS အကြောင်းကိုအပေါငျးတို့သသတင်းထွက်ရှာပါ။ အန်းဒရွိုက်န်းကျင် goldmine ။
ဆန်းစစ်ခြင်း: dr.fone ပြန်သေခြင်းမှ iPhone ကိုဖိုင်တွေဆောင်တတ်၏
တစ်ဦး iPhone, iPad အသုံးပြုသူသိတယ်ကြောင့်မတော်တဆရိုးရှင်းစွာမျက်နှာပြင်မှားလမ်းထိအားဖြင့်သင့်ကိရိယာမှသတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ဖို့အားလုံးကိုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒေတာသွားပြီတစ်ချိန်ကသင်က iOS devices တွေကိုထံမှဆုံးရှုံးသွားသောဒေတာ ... အချိန်ကိုအချို့ပြန်လည်နိုင်စွမ်းသက်သေပြကြောင်း Wondershare ရဲ့ dr.fone တစ်ဦး $ 100 ကိုအစီအစဉ် (အခမဲ့ Feature-ကန့်သတ်သရုပ်ပြ) ရှိမဟုတ်လျှင်ကောင်းသော-and ပြုလုပ်ဘို့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Read more >> PC World ကို 2012 ခုနှစ်, မှသည်
Android ဖုန်းများအတွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး Data Recovery Software များ
Android အတွက် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို Android အတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးဒေတာဆယ်တင်ရေးကိရိယာတခုအဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ပယ်ဖျက် SMS ကိုကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အဆက်အသွယ် recover နဲ့ကြောင့် Android ထုတ်ကုန်များတွင်ပါရှိသော SD ကဒ်များအနေဖြင့်, မဖျက်ပစ်စက်ရုံတွင် settings restore ပြန်, ROM ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, rooting နှင့်ထို့ထက် ပို. မှပျောက်ကွယ်သွားကြပြီပျောက်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို retrieve နိုင်ပါတယ်။
Read more >> Lifehacker, 2016 မှစ.
Wondershare အားဖြင့် Dr.Fone ပျောက်ဆုံးဒေတာကိုတစ်ဦးလေပြေကိုပြန်လည်ရရှိရန်စေသည်တဲ့ထိပ်တန်း application ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများများစွာ, နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယခင်ကဖျက်ပစ်ခံရပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Read more >> က CNET, 2014 မှစ.
iOS ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက် Wondershare dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ
iOS အတွက် Wondershare dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာသင်သည်သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch ကိုကနေဖျက်ပစ် data တွေကို recover ကူညီပေးသည်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Read more >> Softonic, 2016 မှစ.
စပွန်ဆာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို Software များ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကိုတဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့အရာလုပ်ဖို့ tool ကိုရှာနေသူမည်သူမဆိုအားပူဇော်ပဒေသာရှိပါတယ် - သူတို့ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကိရိယာသို့မဟုတ် microSD ကဒ်အနေဖြင့်ဒေတာများပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျိုးထုတ်ကုန်များမှဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူအဖြစ်သူတို့က lockscreen ကုဒ်မေ့လျော့သင့်ပါတယ်သူတို့ရဲ့သော့ခတ်မျက်နှာပြင်အတိတ်ရတဲ့အတွက်အသုံးပြုသူများအကူညီနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းအမှုအရာအပေါ်anice ပြီး touch နဲ့လိုက်တယ်။
Read more >> Android ကိုခေါင်းစီးသတင်း, 2016 မှစ.
iOS ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ
သင့်ရဲ့ device မှတိုက်ရိုက်တင်ပို့မဖြစ်နိုင်ပါရှိလျှင်, dr.fone တစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drive ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ, တစ်ဦး iTunes ကို backup ထဲမှာ embedded backup ဖိုင်တွေအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ iPhone ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ software ကိုလည်း iCloud ကနေ backup ဖိုင်တွေရယူနိုငျပါသညျ။ ဤအ backup လုပ်ထားနည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံး iMovie, iPhoto, Camera Roll တွင်ဓာတ်ပုံစီး, Kindle, Keynote, အသံမှတ်စုများနှင့်အသံမေးလ်ကိုဖိုင်များအပြင်, တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်စကင်ထဲကနေပြန်ဆယ်တင်လို့ရတဲ့ရှိသမျှသောဖိုင်ကိုအမျိုးအစားများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Read more >> TopTenReviews, 2016 မှစ.
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာသားမွေးကို iOS
(ပျက်စီး) ကို iOS ၏ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်အချက်အလက်များနှင့် files တွေကို iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch ကိုမှ backup လုပ်ထားစရာမလိုဘဲ restore ကိုထောက်ပံ့ပေး; ယင်းကို iOS device မှဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူ, iCloud Backup နဲ့ iTunes ကို Backup ကို: device ကိုပေါ် မူတည်. အဆိုပါဒေတာကိုချွေတာဘို့နှစ်ခုနည်းလမ်းများ, ထောက်ပံ့
Read more >> heise ဒေါင်းလုပ်, 2014 မှစ.
WONDERSHARE DR.FONE: Data Recovery ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ် Delete များအတွက် APPLICATION သို့
Mishandling သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးကြောင်းကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကို update သင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်တွင်သင်၏အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အတိတ်ကာလတစ် backup လုပ်ထားခဲ့သောသူတို့အဘို့, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။ အခြားသူတွေသည်ကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်, သငျသညျကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုလျှောက်လွှာများအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာရှိ Wondershare dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ။
Read more >> PHONEANDROID, 2016 မှစ.
အဆိုပါအန်းဒရွိုက် Guy Subsciber: ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် 412,000+ Views: 138,000+
ဂျေး Kapoor က Subsciber: 161,000+ Views: နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် 20,000+
GadgetIn Subsciber: 100,000+ Views: နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် 125,000+
မင်္ဂလာ Tech မှ - အန်းဒရွိုက် Subsciber: ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် 1,042,000+ Views: 20,000+
Download iOS အတွက် dr.fone ဒေါင်းလုပ် Android အတွက် dr.fone